iyo Shariif Xasan oo Taageray Hadalkii Cali Maxamed Geeddi ee ahaa in Sharci loo samaynayo Khayraadka Dalka Soomaaliya...
SomaliTalk.com | May 30, 2006
Guddoomiyaha Baarlamaanka DFKMG oo Booqasho ku tegey Boosaaso ayaa sheegay in sharci loo samayn doono Khayraadka Dabiiciga ah ee dalka, hadalkaas oo taageray hadalkii Geedi.
Madaxweynaha Soomaaliya: "Khayraadka Dabiiciga ah ee dalku leeyahay Mas'uuliyadeeda waxaa iska leh Dawlada Dhexe."... GUJI... Sept 2005
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Puntland (DGPL) ayaa markii ugu horeysey qiray in shirkadaha ay dowladiisu heshiiska la gashay ay yihiin jirri, isla mar ahaan taasna ay hubaysan yihiin ayagoo garabka ku sita qoryo. Hadalkaas oo ka yaabiyey shacabka ku dhaqan Puntland guud ahaan dalka Soomaaliya.
Hadalkaas oo ka dambeeyey si kooban oo ay saxaafadu su'aalo u weydiisey madaxweyne Cadde iyo Shariif Xasan oo ku sugan magaalada Boosaaso, halkaas ay booqasho ku joogaan waftiga guddoomiyaha baarlamaanka DFKMG.
Cadde Muuse waxaa la weydiiyey: "Madaxweyne waxaa la leeyahay shirkaddan aad idinku heshiiska la gasheen ma ahan shirkad jirta oo ayadaa dallaal sii ah, arrimahaas maxaa ka jira."
Madaxweynaha DGPL Gen. Maxamuud Muuse Xirsi Boqor oo arrintaas qiraya waxa uu ku jawaabey: "Waa run weeye, JIRRI* weeye, annagaana dooranay, shariikad weyn waxba noo qaban meyso, boqol sano ayey waxna noo qaban waayeen."
Madaxweynuhu waxa uu qiray in shuruudaha ay shirkadaas ku doorteen ay ahayd in ay tahay shirkad jirri ah, asagoo arrintaas ka hadlayana waxa uu yiri: "condition-nada (shuruudaha) aannu ku dooranay shariikadahaa waxaa weeye, niman jirri ah iney yihiin, laakiin annaga dantayadu waxaa weeye in ay Puntland wax nalooka soo saaro. Waxaana hubnaa iyagu in ay noo soo saarayaan, kuwa kale noo soo saarayn.".
Cadde Muuse oo markii ugu horeysey qiraya in shirkada ay DGPL heshiiska la galeen ay huban santahay waxa uu yiri: "Qolooyinka ku doodaya shariikad yar bey qaateen, maad keentaan idinku marka hore, haddaanu wax keenay annagaa keenay jirri qoryana u suran yahay garabka baannu dooranay, waana shariikad yar, laakiin waxaan rabney bey noo soo saari lahayd haddii carqaladda nalaka deyn lahaa."
Hadalkii Cadde Muuse ka dhegeyso halkan.... (hadalkaas waxa uu yiri May 29, 2006)
Shariif Xasan, Guddoomiyaha baarlamaanda DFKMG oo booqanaya Gobolka Bari ee Soomaaliya ayaa sheegay in dhowaan sharci loo samaynayo khayraadka dabiiciga ah ee dalka, arrintaas oo uu ku waafaqay hadalkii ra'iisul wasaaraha DFKMG, Cali Maxamed Geedi ee sharci u samaynt akhayraadka dabiiciga ah ee dalka.
Hadalkii Shariif Xassan ka dhegeyso halkan... (Hadalkaas waxa uu yiri May 29, 2006 asagoo jooga Boosaaso)
May 18, 2006 ayey ahayd markii uu ra'iisul wasaaraha DFKMG sheegay in sharci loo samayn doono khayraadka dabiiciga ah ee Soomaaliya, sharcigasn al ahor geyn doono baarlamaanka. Arrintaas oo keentay in May 20, 2006 uu Cadde Muuse kalsoonidii kala laabtay Ra'iisul wasaaraha DFKMG.
Khamiis May 25, 2006 warqad ay shirkadda Range Resources u dirtay suuqa Ganacsiga ee Australia (ASX) ayey ku cadaysay in uu guddiga shirkaddaas iska casiley agaasimihii guud, Mr. Jim Marinis. Faahfaahin dheeraad ah lagama bixin sababta keentay is casilaadaas.
May 28, 2006 ayaa magaalada Boosaaso waxa booqasho ku tegey Guddoomiyaha Baarlamaanka DFKMG. Guddoomiyaha waxa uu Boosaaso kula kulmay Madaxweynaha DGPL, Cadde Muuse. Markaas ka dib ayaa Shariif Xasan waxa uu saxaafada u sheegay in sharci loo samayn doono khayraadka Soomaaliya.
QEEXID: Kelmedda JIRRI oo dhowaan kusoo biixtay qaamuuska Soomaaliga waa kelmed loo adeegsado dad ama koox aan cidna u nixin oo laaya cid kasta oo aan wax la dhicin, waxaa kale oo lagu qeexaa ma-naxayaal aan cidna dan u hayn aan ka ahan in ay waxay arkaan burburiyaan, kelmeda afafaka kale ugu dhowaan kartaa waa maafiyo. JIRRI waa kuwa maalin kasa shacabka cabsi gelin ku haya, lama sheegin JIRRI haba yaraatee wax faa'iido ah keentay.
Isbedellada Saamiyada Shirkada Range Resources: ee Suuqa Ganacsiga Australia:
Cadde Muuse �Shirkado Mooryaan ah ayaanu heshiis la galeynaa�, waayo�.�
Waxaa magaalada Boosaaso ee Gobalka Bari ku sugan Guddoomiyaha Baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan oo halkaasi u tagay sidii uu gacan uga gaysan lahaa dhameynta khilaafka u dhexeeya Maamul Gobaleedka Puntland iyo Dowladda Federaalka gaar ahaan Ra�isul Wasaare Cali Max�ed Geedi.
Gen, Cadde Muuse ayaa mar uu kulan gaar ah la yeeshay Guddoomiyaha Baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa saxaafaddu waxay wax ka weydiisay waxyaabihii ay isla soo qaadeen, waxa uuna sheegay in guddoomiyaha Baarlamaanka si aad ah isugu afgarteen arrimihii ay isla soo qaadeen, mar la weydiiyay Gen, Cadde Muuse in Maamul Gobaleedka Puntland ay Dowladd u ku heysato in ay heshiis la galeen shirkado Maafiyo ama Mooryaan ah, waxa uuna yiri �waa run Mooryaan ah ama Jirri ah ayaanu heshiis la galnay, waayo shirkadihii kale way na diideen kuwaana waxaan ka sugeynaa in ay wax uun noo soo saaraan, waayo Gobalku waxa uu u baahan yahay dhaqaale�.
Gen, Cadde Muuse waxa uu intaa sii raaciyay �Shirkadihii Mooryaanta ahaa ayay dowladdu noo diidan tahay, may noo keenaan kuwo ka wanaagsan si ay noogu soo saaraan kheyraadka dhulkeen, runtii kuwaas ayaanu la macaamileynaa si uu Gobalku u helo dhaqaale wanaagsan�. Ugu dambeyntii waxa uu sheegay Cadde Muuse in wixii sharciyan ah ee ay dowladdu ku leedahay ay fulinayaan balse wixii sharci daro ah ay ka hor- imaan doonaan.